Ukugonywa - princetoncovid.org
Imininingwane Engaphezulu Yokugoma
Umuthi Wokugomela We-Pfizer Uyatholakala Eminyakeni engu-16 no-17
UMnyango wezeMpilo ePrinceton uhlanganyele nelokishi laseHamilton, iWest Windsor Township kanye ne-Olden Pharmacy ukuhlinzeka ngomtholampilo wokugoma i-Pfizer kubantu abaneminyaka engu-16 no-17 bendawo. Ukufaneleka kubandakanya: Labo abahlala, abaya esikoleni noma abasebenza ePrinceton Abakatholi umuthi wokugoma i-COVID-19 (futhi njengamanje abanaso isikhathi sokuqokwa) Abakwazi ukuhambela […]
Funda kabanzi: Umuthi Wokugomela We-Pfizer Uyatholakala Ngeminyaka eyi-16 no-17
IPrinceton Health, Ithimba le-YMCA lomtholampilo wokugoma we-Ephreli 29
UMnyango wezeMpilo ePrinceton uzobamba umtholampilo wokugoma i-COVID-19 ePrinceton YMCA ngoLwesine, Ephreli 29 kusuka ngo-10 ekuseni kuya emini. Abantu abaneminyaka engu-18 nangaphezulu bangabhalisela umtholampilo lapha. Ukubhaliswa kuzovalwa ngemuva kokuhlelwa kwemithamo engama-80.
Funda kabanzi: IPrinceton Health, Ithimba le-YMCA lomtholampilo wokugoma we-Ephreli 29
Ukuvuselelwa kokugoma ngoMashi 1; shayela amavolontiya
Gov. Murphy umemezele namuhla ukuthi iNew Jersey izothola cishe imithamo engama-70,000 yomuthi wokugoma omusha we-COVID-19 osanda kuvunywa kamuva kuleli sonto. Umbuso uphinde wakhulisa imihlahlandlela yokuthi ngubani ofanele ukuthola umuthi wokugoma Kusukela ngoMashi 15, amaqembu alandelayo azofanelekela umuthi wokugoma i-COVID-19: Abafundisi, kubandakanya nabasebenzi abasizayo, ku-Pre-K-12 […]
Funda kabanzi: Mashi 1 ukuvuselelwa kokugoma; shayela amavolontiya
Ukuvuselelwa kokugoma koMnyango Wezempilo
Njengamanje akukho aphoyintimenti emithamo yokuqala etholakala ngoMnyango Wezempilo ePrinceton. Sicela ungafoneli noma uthumele i-imeyili ngokubuza ngama-aphoyintimenti. Uma ngabe uhlelelwe umthamo wakho wesibili noMnyango Wezempilo wasePrinceton, usazolithola lelo nani lesibili ngosuku lokuqokwa oluhleliwe. Ukunikezwa komuthi wokugoma kusenomkhawulo. IPrinceton […]
Funda kabanzi: Ukuvuselelwa kokugoma koMnyango Wezempilo
I-County imemezela ushintsho ekusatshalalisweni komuthi wokugoma
AbakwaMercer County Division of Health bamemezele ngasekuqaleni kwaleli sonto ukuthi benze izinguquko ezithile ekusatshalalisweni kwemigomo ngokuyalelwa ngumyalelo woMnyango Wezempilo waseNJ. Uyacelwa ukuthi uchofoze lapha ukuthola Isibuyekezo Sokugomela sikaFebhuwari 10. ** Sicela wazi: Uma unomthamo wesibili ohlelelwe uMnyango Wezempilo ePrinceton, uzothola lowo mthamo […]
Funda kabanzi: Isifunda simemezela ushintsho ekusatshalalisweni komuthi wokugoma
Isibuyekezo sokugoma esinguFeb. 8
Umbuso wazise omasipala baseMercer County ukuthi ngesikhathi sokushoda kwemishanguzo njengamanje, ngeke isakwazi ukuletha imishanguzo emitholampilo kamasipala. Ngenxa yalokhu, imitholampilo ebanjwe nguMnyango wezeMpilo ePrinceton kanye neminye iminyango yezempilo kamasipala eMercer County izobanjwa okwesikhashana kusukela ngoFebhuwari 13. Uma usuphakanyisiwe umkhiqizo, umasipala […]
Funda kabanzi: Isibuyekezo sokugoma sikaFebhuwari 8
Okwakamuva ngokugoma okuvela ePrinceton Health Dept.
Funda kabanzi: Okwakamuva ngokugoma okuvela ePrinceton Health Dept.
Ukugonywa kuqala eMercer County Kube nokuningi ezindabeni mayelana nenqubo yokugonywa ukuze kuvikelwe ezifweni ze-COVID-19 kanye nemizamo yendawo yokuletha umuthi wokugoma. Ukukhishwa, ezingeni likazwelonke kuhlangabezane nezinkinga ezithile zokuhlinzekwa nezinye izinto, kodwa endaweni, ngezinga lethu elincane, izinto ziqhubeka kahle. […]
Funda kabanzi: Ukugonywa kuqala eMercer County